Izigidi zezingane ezingu-1 zizindla ngokuthula komhlaba ethempelini eThailand - AFRIKHEPRI FOUNDATION
Izigidi zezingane ezingu-1 zizindla ngokuthula komhlaba ethempelini eThailand
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngoJulayi 9, i-2019
I-21 Septemba 2015, ukugubha iSuku Lokuthula Lwamanye amazwe, izingane eziyisigidi ezivela ezingaphezu kwezikole ze-5000 zihlangana eThempeli likaFra Shammakaya eThailand ukuze zizindle ndawonye ukuthula emhlabeni. Bajoyine izigidi zabanye emhlabeni jikelele. Khumbula ukuthi ku-2012, imizi ye-248 iqhaza kulo mcimbi, i-564 ku-2013, ne-1167 ku-2014. Kulo nyaka abahleli bakhuluma ngokuphelele okwedlula amadolobha we-1500 emhlabeni owahlanganyela ekuzindleni okuvumelanisiwe ukuthula kwezwe. Lo mcimbi uphinde wabonisa ukukhululwa kokuthula kwangaphakathi kwedokhumenti ekuthuleni kwezwe, okukhuluma ngokuthula komhlaba kanye nendlela yokufeza ngayo ngokugxila ekuthuleni kwangaphakathi okumele ngamunye wethu akwenze ukuze enze lokhu kube kuhle. Izifundo eziningana zesayensi ziye zabonisa izinzuzo zokuzindla ebuchosheni bomuntu futhi abantu abaningi beba abalandeli abavamile. Uma ungakaze uzame ukuzindla, ngiyanxusa ukuba ukwenze ngoba lo msebenzi uthintshe izimpilo zabantu abaningi. Abanye baye bakwazi ukunqoba ukucindezeleka nokukhathazeka ngokuzijwayeza okuvame ukubavumela, phakathi kwezinye izinto, ukuba bazizwe kangcono futhi balahle izintambo eziningi zezifo ezingqondweni.
Usuke usabela "Izigidi zezingane ezingu-1 zizindla ngokuthula" Imizuzwana embalwa edlule